ဂရိ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / EPC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဂရိ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / EPE
တစ်ဦးကဂရိ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / EPE ဂရိနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး EPE အစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီအားဖြင့်အမှန်တကယ်တစ်လီမိတက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့အတူကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား EPE အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
ဂရိနိုင်ငံအရှေ့တောင်ဥရောပ၌တည်ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "ဂရိသမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လည်း "Hellas" အဖြစ်လူသိများသည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရွေးချယ်တင်မြှောက်တအိမ်တည်းပါလီမန်နှင့်သမ္မတနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦး "ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ဂရိ LLC အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဂရိလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (EPE) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားများကိုကမ်းလှမ်း:
•နိုင်ငံခြားသားတို့ကစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု: တစ်ခု EPE အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•အနိမျ့မြို့တော်: အဆိုပါနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်ရှယ်ယာမြို့တော် 4,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: ဂရိနိုင်ငံသည်အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူစီးပွားရေးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေးဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (EPE) အမည်
တစ်ဦးကဂရိ EPE ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုကလုပ်ဆောင်သွားရန်ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ၏အမည်များကို အသုံးပြု. ရည်ရွယ်ထားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုဖြစ်စေပါဝင်ရမည်။ အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုကုမ္ပဏီအတိအကျရောနှောသို့မဟုတ်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အခြားကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုလွန်းအလားတူနာမည်တစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားမတိုင်မီကတစ်ခုလျှောက်ထားသူကုမ္ပဏီ၏အဆိုပြု name ကိုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ EPE က၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်သို့မဟုတ်ယင်းနောက်ဆက် "LLC" ၏အဆုံးမှာစကားများ "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦး EPE သာန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများပေးနိုင်ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အာမခံလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများသင့်လျော်သောလိုင်စင်နှင့်အတူတရားဝင်လုပ် SA ကုမ္ပဏီများအတွက် reserved ထားတဲ့ EPE ရဲ့အားဖြင့်ကောက်ယူရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
•သူတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးတည်ရှိရာတည်ရှိသောအနီးဆုံးပထမဦးစွာ Instance တရားရုံး၏ကုမ္ပဏီ Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအပါအဝင် Notary အကျင့်ကိုကွပ်မျက်၏တစ်လအတွင်း၌။
•တရားရုံး၏အတွင်းရေးမှူးလီမိတက်မှုစိစစ်ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ EPE က register လုပ်သွား။
•အ Notary ကျင့်ကိုအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်တစ်ဦးကအသိပေးစာကို "Corporation ၏သတငျးလှာနှင့်လီမိတက်မှုစိစစ်ကုမ္ပဏီများ" အပိုင်းအောက်ရှိတရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Notary ကငျြ့၏အကျဉ်းချုပ်အောက်ပါအသေးစိတျမဆံ့ပါလိမ့်မယ်:
(ခ) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ / တည်ထောင်သူများအပြည့်အဝအမည်များ;
•ပြီးတာနဲ့သမျှသောဤခြေလှမ်းများ၏ပြည့်စုံပြီနှင့်တရားဝင်ပြန်တမ်းအတွက်အသိပေးစာ၏ထုတ်ဝေအောက်ပါတို့သည် EPE တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါ EPE တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်•ကစာရင်းကိုင်နှင့်ကုမ္ပဏီစာအုပ်တွေဟာအခွန်အာဏာပိုင်တွေကနေဖြင့်တံဆိပ်ထုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ဒေသခံကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နေကြသည်ရှိရာအခွန်ရုံးနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
အစပိုင်းမှာအသင်း (အထုံးအဖွဲ့တို့) ၏တစ်ဦးဆောင်းပါးများတစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေအများပြည်သူရှေ့တွင်ကွပ်မျက်ခံရခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများကအောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ရမည်:
•ကုမ္ပဏီအမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားသို့မဟုတ် "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "LLC" နဲ့အဆုံးသတ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နှင့်အတူရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအမည်များကိုဖြစ်စေပါဝင်ရမည်;
•စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရလုပ် SA ကုမ္ပဏီများနှင့်မဟုတ် EPE ရဲ့အဘို့သိုထားလျက်ရှိသောအာမခံသို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များ;
•ငွေသားနှင့်အတူ paid 4,500% ၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူ 50 ယူရိုစုစုပေါင်းရှယ်ယာမြို့တော်;
•အစဉ်အမြဲမဖြစ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီရဲ့ကြာချိန် (သာတစ်လုပ် SA အစဉျအမွဲဖြစ်ပါသည်) နှင့်၎င်း၏သက်တမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး EPE ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်တစ်ခုတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးထက်ပို EPE ၏တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်မဖွစျနိုငျသညျ။
ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များထက် သာ. ကြီးမြတ်သော privacy ကိုအဘို့အခွင့်ပြုထားသည်။
တစ်ဦး EPE ဖွဲ့စည်းရန်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များထဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်မည်သည့်နိုင်ငံသား၏နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မြင့်မားနေတဲ့ဒေသခံတဦးကဒါရိုက်တာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အခါတိုင်းဒေသန္တရအစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့်အခွန်အေးဂျင့်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည်ဟုအကြံပြုသည်။
တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဟာ EPE ပိုမိုထိန်းချုပ်များအတွက်သာဒါရိုက်တာအဖြစ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူခန့်အပ်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မရှိပါ။
စကားသည် "မှတ်ပုံတင်ရုံး" Greek သို့ဘာသာပြန်ဆိုကြပါဘူး။ တိုင်း EPE အခွန်အာဏာပိုင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်ဆေးခြင်းစခွေငျးငှါအဘယ်မှာရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
နိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်ရှယ်ယာမြို့တော်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လျှောက်ထားသည့်အခါလုံးဝဖွင့်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည့် 4,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး 50% အတွက်ငွေသားပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ကတရားဝင်သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်တန်ဖိုးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
နိမ့်ဆုံးအမည်ခံရှယ်ယာတန်ဖိုးကို သိ. 30 ယူရိုသို့မဟုတ်အကွိမျမြားစှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များအဘို့တစ်ဦးကနှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးများဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းနှစ်ကုန်အပြီး3လအတွင်းကျင်းပရပါမည်။ အစည်းအဝေးများကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်းပနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းများအစည်းအဝေးတွေကျင်းပဘို့အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။
အထွေထွေအစည်းအဝေးများဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖျက်သိမ်းအတည်ပြု, ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း, အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများမှပြင်ဆင်ချက်အပါအဝင်အားလုံးအဓိကကုမ္ပဏီကိစ္စရပ်များကိုဆုံးဖြတ်။
အမြတ်အစွန်းအပေါ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 29% ဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားမိ: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းအခြားနိုင်ငံများတွင်အခွန်များပေးဆောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေအပေါ်အခွန်မှဘာသာရပ်လူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖေါ်ရမယ်လိုပဲသူတို့ရဲ့ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရမယ်သော်လည်း။
တိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနှစ်စဉ်အခွန်ပြန်လာနှင့်အတူနှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက် file ရမည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းစာရင်းစစ်ဆေးရှိရမည်နေချိန်မှာသူတို့က "သေးငယ်တဲ့" ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်သည်မှန်လျှင်, EPE ရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
တည်ထောင်သူနှင့်ကနဦးအစုရှယ်ယာရှင်များ (ကနဦးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့ယူဆ) အမည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးရှယ်ယာ, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, အီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်များ၏စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: တစ်ဦးကဂရိ LLC / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ / EPE ကဤအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။